Gudoomiye Mursal oo xilka kala wareegay Prof Jawaari – Kalfadhi
Gudoomiye Mursal oo xilka kala wareegay Prof Jawaari
Xaflad xil wareejin ah ayaa maanta ka dhacday aqalka villa Hargeysa ee madaxtooyada ku dhextaal halkaasi oo ay xilalka ku kala wareegayeen Gudoomiyaha cusub ee Golaha shacabka Maxamed Mursal iyo midkii hore Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Guddiyada joogta ee Golaha shacabka ayaa goob joog ka ahaa xilwareejintii maanta dhacday.
Gudoomiyihii hore ee Golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo hadal kooban ka jeediyay munaasabadii uu xilka ku wareejinayay ayaa sheegay in Barlamaankii 8aad ayyan ka dhaxal wax Document ah marka loo barbardhigo waqtiyadisii uu haayay xilka Gudoomiyaha golaha shacabka.
Prof Jawaari ayaa ku dheeray mudadii uh kursiga ku fadhiyay howlihii uu qabtay ayna jiraan kuwo wali qabyo ah.
Gudoomiyaha cusub ee Golaha shacabka Maxamed Mursal ayaa sheegay inuu talo iyo fikradba uu la raadsan doono Gudoomiyihii ka horeeyay si waayaga aragnimadiisa uuga faaideysto.
Xildhibaanno ka tirsan Hirshabelle oo maanta booqanaya dadka ay saameyen fatahadaha Beledweyn